ဪ….. ဒီဘလော့ ကိုဆက်မရေးတော့ပါဘူးလို့ ကြော်ငြာထားပြီးကာမှ ဘယ်လိုမှ မအောင့်နိုင်တော့လို့ နဲနဲတော့ ညည်းလိုက် ဦးမယ် လေ ..... ငါကလဲငါပဲ... လူကဲခတ် ညံ့လိုက်တာ.....:( ငါ အထင်ကြီး ခဲ့တဲ့လူ က သုံးမရအောင် လင်တရူးနေ တာ ငါ တစ်ကယ် ပဲမသိခဲ့ပါလားလို့..... အင်း....... အဲ့ဒါကလဲ… သူမက.. သူမကိုလူအများ အထင် ကြီး အောင် စာကြီးပေကြီးတွေ ဖတ်သယောင် ယောင်နဲ့ သူ့ဘလော့ပေါ်မှာတင်ရေးလေ့ရှိတာကိုး... သူမနဲ့ ဒေါ်ခင်ဦးမေ ကိစ္စ စကားပြောခဲ့ ဘူးတော့ လူကြီးဆန် ပြီး တည် တည် ငြိမ် ငြိမ်နဲ့ပြောဆိုတတ်ခဲ့တာကို အဟုတ်ထင်ပြီး ငါ့မှာ လေးစား ခဲ့ရသေးတယ်..... :(
ဖြေကြည့်သူများ ပို့စ် တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ပြော လို့ သွားဖတ်ကြည့်တော့ မှ သူမ ဟာ စာ ကြီးပေကြီး အမှန် တစ်ကယ် ဖတ် သူမဟုတ်ပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်……… နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားတာတော့ထားပါတော့ လေ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးနိုဘယ် ဆုရှင်ကျခပ်ဝေးဝေး လို့ပြောပြီး …. အနောက်နိုင်ငံက ဒတ်ခ်ျ ပန်းချီဆရာ ဗန်ဂိုးလိုမျိုး ၊ ရူးပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ သွားတဲ့ ဟာမျိုး ကိုသိနေတာကတော့ ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်ဘူး...... ဂေါက် နေတာ လား.... သူ့လိုပဲရူးကြောင်ကြောင်မို့ ပိုသိနေတာလား :) ……… ဒါမှ မဟုတ် စိတ်ကြီးဝင်ပြီးအောက်ခြေလွတ်နေတော့ ….မြန်မာမိန်းမ ချင်း... သူ့ထက် နာမည်ကြီးတဲ့သူကို ဂျေဝင်နေလို့မသိချင် ယောင်ဆောင် နေတာဖြစ်ရမယ်... တစ်မျိုးတွေးရင်….. ကော်မန့် သမား တွေကို အတင်း ကြောက်ကန် ကန်ပြီး ပြီး မျက်စိစုံမှိတ် ငြင်းနေ ပုံက မျက်ကန်း တစ္ဆေ မကြောက် ရှေ့ဆက် တိုး ပြီးရင်း… တိုး နေ တဲ့ …. စောက်ကန်းမနဲ့ တူနေတယ်လို့ပြောရမလားပဲ……….
သေချာတာကတော့ အ သက်သုံးဆယ်ရောက်လာပြီး လင်မရသေးလို့ လင်တရူးနေတာ ဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ :)...... ဒါကြောင့်လဲ မင်းသမီး တွေလို နာမည်ဆိုးထွက်မှ နာမည် ပိုကြီး တတ်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်း သူများ အမြင်ကတ် စရာကောင်း အောင်ရေးနေတာ...... နာမည်ကြီးမှ..... ဘလော့ဂါကိုကို ၊ မောင်မောင် တွေကသူ့ကိုမြင်လာမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ၊ အင်း .....ဒီလိုစဉ်းစားတော့လဲ ငပုမလို့ သူများက အမည်တပ်ထားတဲ့ သူမ ဟာသနားစရာပါလားနော်..... ငါ့ သူငယ်ချင်း ကိုကြီး တွေကလဲ ဒီလို ခေါင်းကြီး ကိုယ်သေး ပစ္စည်း မဲ့ မိန်းမမျိုးကိုတော့ စိတ်ကူးထဲတောင်ထည့် မှာမဟုတ်ဘူး :D.........
သူမ ခမြာ သနားစရာအကောင်းဆုံးက ဟို အစ်ကိုကြီး သမိုင်းရူး ယောင် ယောင်၊ ကွန်ပြူတာရူး ယောင်ယောင်ကို အတင်းလိုက်ချိတ်နေ ရတာပဲ....... အဲဒီ အစ်ကိုကြီး နာမည်နဲ့စာညွန်း တွေကို သူမ ဘလော့ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာ တင်ရုံအားမရသေးလို့ ...... ရေးသမျှ တွေကိုဖားပြီး ကော်မန့် တွေပေး ရတာ တစ်ခုမက လေး ငါးခု...... နောက်ဆုံးပို့စ် ထက်ထက် မိုးဦး အကြောင်းရေး ထားတဲ့ပို့စ် မှာများ ပြာယာခတ်ပြီး ပေးထားလိုက် တာ အရှက်ကုန်ခမ်းတဲ့ မိန်းမ နောက်ပိုးကို ဖြစ်လို့...... ဒီအစ်ကိုကြီးကလဲ ဘာလို့ ပြန်မကြိုက်ပါလိမ့် နော်.... အင်း ......ရုပ်ကလဲလန်း မှ မလန်းပဲကိုး…… သူ့ရဲ့ မနှဲလေး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဓတ်ပုံတွေ သူ့ဘလော့မှာ တင်ထားရတာလဲ အမောပဲ...... တစ်ယောက် ယောက်နဲ့သာ အချိန်မှီမချိတ်မိရင် ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်…….
ငါနဲ့စကားပြောတုန်းကလဲ သူက ဒေါ်ခင်ဦးမေစီဘောက်က တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ ကျူ နေပုံရ တယ်.......... "တော်ပါသေးတယ်ညီမရယ် အမက သူမဟုတ်မှန်းသိ ရလို့ ကျေနပ်သွားပါပြီးတဲ့" ……ဆိုပြီးပြောသွားခဲ့သေးတယ်.......... ဪ... အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်………. အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ……. ငါကထင် ခဲ့တာ ဒေါ်ခင်ဦးမေကို ခင်လို့....... စေတနာရှိလို့ ကြားကနေငါ့ကို လာပြောပေးတယ် မှတ်နေတာ အခုသေချာပြန် စဉ်းစားမှ သူက သူ့ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာဖြစ်နေတာကိုး......... စီဘောက်ကိုလာပြီး စာအုပ် အကြောင်း တွေပြောနေတာလဲ သူများအထင်ကြီး အောင် အထူးသဖြင့် ကျားတွေအတွက်…. ပျိုးနေတာ နေမှာပဲ ..... သူ့ကို သူလဲ အထင်တော် တော်ကြီးပုံရတယ် နိုင်ငံရေး ဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးနေလိုက်တာ တစ်ခုမှလဲမဟုတ် ဘူး “ကြာကြာပေါင်းမှ အကြောင်းသိ” စကားပုံ လို အခုကြာကြာဖတ်ကြည့်မှပဲ ဘာမှ မသိတဲ့ငပိန်းမ ကြီးဆိုတာ သိရတော့တယ်.......... မြန်မာပြည်မှာ နေလို့ အမြင် မကျယ်တာ ကထားပါတော့ …… စင်္ကာပူမှာနေပြီး
ပွေးမ ဖြစ်နေတာက တော့ အဆင့် မြင့် မြင့် နဲ့ ရေးသား ဆွေးနွေးတတ်တဲ့ ဘလော့ဂါကိုပေါရဲ့ ချီးသာစားဖို့ ကောင်းတော့တယ်…….
တစ်ကယ်တမ်းကျ တော့ သူမ ဘာဘာ ညာညာ ဘာမှ မသိဘူး……. ကြောင်နေ ရတော့ ....ဟိုအကိုကြီးက.....ရေ အိုင် ထဲက ဖားသူငယ် အမြင်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာတွေကိုလဲ ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ………. ကြိုက် မရှက် ငတ်မရှက် ဘဝ ဆို တော့….. အတင်းကာရော ထောက်ခံနေ တော့ တာပဲ…. သူ့ အ ဖေ သာ သူ့သမီး အဲဒီလောက်ဖွန် နေ မှန်း သိရင်တော့ ရှက်လွန်း လို့ မြက်နှာ ဓါး နဲ့လှီးကိန်း ဆိုက်မယ်........ သူ့အမေကတော့ ခွေး ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝက်ပဲ ဖြစ် ဖြစ်....... အမြီးဖြတ်ပြီး အမြန်ဆုံးပေးစားမှာ အသေ အချာပဲ........ တော်ပြီး တော်ပြီး အချိန်ကုန်လိုက်တာ သူ့ဘာသာ လင်တရူး ရူး....... အချစ်ရူး ရူး ........ရှက်ကျောပဲပြတ် ပြတ်......ဒီဂေါက်ကြောင်… ရူပါ ချူချာ မကို.....................
Posted by Myat Noe Khin at 06:26
ကျမ ရှင့်အကြောင်း မရေးတော့ဘူးလို့ အရင် post မှာ မဝါ ကိုပြောခဲ့ ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရှင်က အခုမေးလာ ခဲ့ တော့ မေးတာတွေ ကို အောက်မှာ ရှင့် post နဲ့တွဲ ပြီးဖြေထားပါတယ်။ကျမကို မုန်းတီးစွာနဲ့ လာရောက်ဖတ်ရှူ့ကြတဲ့ စာဖတ်သူ ပိရိတ်သတ်လဲ ကျမ ဘာကို အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသလဲဆို တာသိကြသလို မခင်ဦးမေလဲသိမှာပါ။ အပေါ်ယံ ကြည့်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆန်တယ်လို့ အမြင်မကြည် ဖြစ် ကြတာ လဲ အားလုံး ဖြစ်ခွင့်ရှိ ကြတာပဲလေ၊ လူတိုင်းကိုယ့် ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရည်ရွယ်ချက် တွေရှိ ကြသလို ကျမလဲ ကျမရည်ရွယ်ချက် အထ မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဒီ blog ကိုရေးခဲ့ တာလဲ long term blogger ဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ် ခဲ့ ပါဘူး၊ ဆက်ရေးချင်လဲရေးမယ် မရေးချင်လဲမရေး ဘူး။ အချိန်ကုန်ခံပြီးဖတ်ပေးတဲ့ မုန်းသူ၊ရန်သူ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့မြေကြီးကိုကြည့်ပြီး လမ်းလျောက်နေပေမဲ့ ခြေထောက်နဲ့ကန်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ကိုထိန်းနေရတယ်။( ရှင့်ကို တစ်ချို့က အဖွားလို့ တောင်ခေါ်နေရ တဲ့ အသက်ရွယ် မိန်းမ တစ်ယောက်က အဲဒီလောက်ထိ ပျော့ညံ့နေတာလား ? ဒါမှမဟုတ် လွန်းထားထားတို့ လမင်းမိုမို တို့ထဲက စာသားတွေလား ? )
ပြင်ပလောက မှာစကားပြောစရာ မိတ်ဆွေ နည်းပါလိးု့ virtual world က မိတ်ဆွေများနဲ့သာ နေတဲ့ကိုယ့်ဘဝဟာ စိတ်အaနှာက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်လာနေခဲ့တယ်။ ( ပြင်ပလောက မှာမိတ်ဆွေမရှိနိုင် လောက်အောင် ဘာချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနေပြီလဲ? ဆန်းစစ်ကြည့်ဖူးလား? )
ဒီနေ့ မနက်က ဘာပြူလို့မှန်းမသိဘဲနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မြုဆိုင်းသလို ဘာမှ မမြင်ရဘူး အရာအားလုံးဟာ မှိုင်းဝေနေခဲ့တယ်။(ဒါဟာလဲ ဖွဲ့နွဲ့ခြင်း တစ်မျိုးလား ? ဝထ္ထုတွေထဲကလား ? ဒါမှမဟုတ် မျက်စိမှုံသောကြောင့်လား ? )
ရေတွေကို ကိုယ်ချစ်တယ်။ တိမ်တွေကိုလည်းချစ်တယ်။ (ဒါတွေကတော့သေချာတယ် အချစ်ဇတ်လမ်း တွေထဲမှာပါနေကျ အရေးတွေ၊ အပြင်လောကမှာ တစ်ကယ်ချစ်လို့မှမရတာ)
အပြန်လမ်းမှာ ရှောပင်းစန်တာ ကြီးလဲ မိုးချုပ်လို့သိမ်း ဆည်းနေခဲ့ပြီ ။ ဆိုင်တွေ လဲ အိပ်ဘို့ပြင်ကြပြီ။ ကြည့် နေရင်းနဲ့ ပတ်စွာခွာ ဖျာသိမ်း ဆိုတဲ့ စကားလုံး the end ဆိုတာ ခေါင်းထည်း ကိုရောက်လို့ရေရွတ်နေခဲ့မိတယ်။ (ဆိုင်တွေပိတ်တာ အပြီးတိုင် မဟုတ်ဘူး လေ၊ နေဝင်ပြီးရင် နေထွက်သလို နောက်နေ့ ပြန်ဖွင့်တာပဲ မဟုတ်လား၊ the end ဆိုတဲ့ တင်စားမှုနဲ့ နယ်ရုပ်ကလေးတွေကို ရှေ့ထွက်ခိုင်းလိုက်တာလား….sdl….boyz…..JD….တို့လေ )
ကိုယ်ဘလော့ပိတ်မှာလား။ စီပုံးပ်ိတ်မှာလား။(အဲဒီလို ရေရွတ်တဲ့ သဘောက ပိရိတ်သတ်ဆီက အကြံညဏ်ယူခြင်းလား သို့မဟုတ် ပိရိတ်သတ်မေတ္တာကို အသနားခံယူခြင်းလား ? ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်တော့တဲ့ အရွယ်များစွာကျော်လွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် decision မချနိုင်တာလား? )
ပိတ်ဘို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေမဲ့ မခိုင်တဲ့ နလုံးသား ကတော့ယိုင်နေခဲ့ပြီ။ (လူတော်တော် များများကို ကျသွားစေလောတ်တဲ့ ခပ်နုနု စကားလုံးတွေပဲ။ မခင်ဦးမေ ပညာတော်တော်တတ်တယ်….ကိုမဆလာကိုလဲ ဒီလိုစကားလေးတွေနဲ့ ကစားခဲ့တာပဲလား) နေ့စဉ်နဲ့အမျ ထိခိုက်ံခံနေရတဲ့ ကိုယ့်နလုံးသား ရင့် ကျက်ပေ မဲ့လည်း. အောင့်နေခဲ့ပြီ။(သူတစ်ပါး ကိုရော ကိုယ့်ကြောင့် ထိခိုက် စေခဲ့သလားလို့ တွေးခဲ့ ဘူးလား ? )
ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ ရပ်စေချင်တာလား။ ဟင့်အင်း ကိုယ်မရပ်ပါဘူး။ ရေးချင်ရင်ရေးမယ်။ မရေးချင်လည်းမရေးဘူး။ ရေးလဲရေးပါတယ်။ မကောင်းဘူးလား. ကျော်ဖတ်သွားပါ။ ကျေးဇူးတင်တယ်။ (ရည်ရွယ်ချက်က တော့ ရှင့်ကို မုန်းလို့ ခါးခါးသီးသီး မုန်းလို့ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ၊ကျမပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတတ်တယ်၊ အုံ့ပုံးမဟုတ်ပါ်၊ အပြောရင့်လို့ အောင့်သွားတယ်ဆိုရင် မတောင်းပန်နိင်ပါ၊)
Anonymous ကြိုဆိုပါတယ်။ ပြောချင်ရာပြောဘို့ဖွင့်ထားပေးခဲ့တယ်။ ကြို့က်သျူရှိမယ်။ မကြိုက်သူရှိမယ်။ ချစ်သူရှိမယ်။ မုန်းသူရှိမယ။် (ဒါ သိပ်မှန်ပါတယ် တို့တွေ တော်တော်များများ ရှင့်ကို မ ကြိုက်ကြ ဘူးလေ) ကြိုက်နစ်သက်သလိုပြောသွားနိုင်ပါတယ်။(ဒါကြောင့် ခုလို blog ဖွင့် ပြီးပြောပါတယ်) ဒါပေမဲ့ မသက်ဆိုင်သူတွေ နစ်နာလို့ မပ်ိတ်ချင်ဘဲပိတ်ခဲ့ရတယ်။ နိုင့်င့ရေးတွေလာရေးပြန်တယ်။ အော်ခက်ပါ့။ လူမှားနေပြန်တယ။် (ဒါကတော့ ကျမနဲ့ မဆိုင်ပါ)
စီပုံးမှာ မိုးမွန်နေပြန်တယ။် ( Blog ဖွင့်ပြီး ရေးထဲက ကျမ စီပုံးမှာ ဝင်မရေးတော့ပါ ) ဘာဖြစ်တာလဲကွယ်။ မကရက ပိတ်သွားတာနဲ့ဘဲ ဒီမှာလာပြီး များ ပေါက်ကွဲနေပြန်တာလား။ ပရိသတ်လိုချင်လို့လား။ (Blog ရေးထဲက ဘာ ပရ်ိသတ် မှမလိုချင်လို့ စီပုံး ရော comment ရော မဖွင့် တာ ဒီထက်ရှင်းတာတောင် ဒီလောက်မရှင်းဘူး ထင်ပါတယ်)
ပြောချင်လို့လား။ outlet လိုချင်လို့လား. ဘာများအကျိုးရှိသွားမှာပါလိမ့်။(ရှင့်ကို မုန်းတဲ့သူတွေ၊ ကြည့်မရသူတွေ ဘက်က တစ်စုံတစ်ရာ အမြတ်ရသွားတယ်လို့မြင်ကြပါတယ်) ပြောလိုက်ရလို့ ရင်ထဲပေါ့သွားသလား။ ဆက်ပြောနိုင်ပါတယ်။ စီပုံးတော့ မပိတ်ချင်ပါဘူး။ အထီးကျန်တဲ့ကိုယ့်ဘဝက စီပုံးကလေးကိုချစ်ပါတယ်။ (အိမ်ရှင်မလဲဖြစ်တယ၊် အလုပ်လဲရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်မှာ အထီးကျန် ဆန်ရ လောက် အောင် အချိန် တွေ ပေါများနေလား ? )
လောကကိုညည်းငွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ ညျော်ကျမယ်ရှင့်လို့ .. အိမ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ဦးမယ်တို့ နဲ့ စိတ်သက်သာသလိုနေနေတာမို့လို့ ခံနိုင်ရည်ရှိ သလောက်ကတော့ ပြောသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ (လောကကို ငြီးငွေ့ ရအောင်စိတ်ဓါတ် ကျနေသလား ? ဒါဆိုစိတ်ရောဂါ အထူးကုဆီသွား ဒါမှမဟုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား။)
သူဘယ်သူလဲလို့တော့သိခွင့်ရှိရင်သိချင်ပါသေးတယ။် ( ရှင့်အုပ်စုက မရီတာနဲ့ gtalk ပြောခဲ့ တော့ ကျမဟာ မိန်းမ တစ်ယောက်ဆိုတာတော့ရှင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ ရှင့်ကိုမုန်း တဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ၊ နာမည်ရင်းပြောစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်၊ virtual world မှာ ရှင့်နာမည် ခင်ဦးမေ ကျမနာမည် မြတ်နိုးခင်)
ချောင်းရိုက်မလို့မဟုတ်ပါဘူး။ (ရိုက်ချင်လဲရိုက်နိုင်ပါတယ်၊ Jurong West မှာ နေ တယ်၊ mid 20s ၊ ဘွဲ့တစ်ခုရတယ်၊ အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ၈ နှစ်သမီး ထဲက စစ်တုရင်ကစားပေမဲ့ နယ်ရုပ်တွေနဲ့မြင်းတွေကို ရှေ့ ထွက်တိုက်ခိုင်း တဲ့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ဘုရင်မကြီးနေရာက မိန်းမတွေကိုမနှစ်သက်ပဲ ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းဆင်း တဲ့ဂျုံးအော့အတ် လိုအမျိုးသမီး များကိုလေးစားသူပါ။) သိချင်တာပါဘဲ။ ( ဒီထက် ပိုသိချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ကိုကျ gtalk မှာလာမေးနိင်ပါတယ်)
Posted by Myat Noe Khin at 00:00
မမဝါရေ.. ဓါတ်ပုံတွေ ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက် မမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေမယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ မဝါပြောသလို အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်ကင်းတဲ့ blogger တွေ ကိုလဲစိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊ တစ်နေ့ညကတော့ မရီတာ နဲ့ gtalk ပြောလိုက်ရသေးတယ်၊ သူကလဲကျမကိုဆုံးမသွားပါတယ်၊ သူကစာကြီး ပေကြီး တွေ ဖတ်လို့လား မသိ စကားပြောတာလဲအ တော် တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တယ်၊ မမဝါနဲ့ တွေ့ ခဲ့ရတာဂုံဏ်ယူ စရာမဟုတ်သလို မခင်ဦးမေနဲ့ မတွေ့ ရတာလဲ ဝမ်းနဲစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ အခု သူတို့သူငယ် ချင်းတွေ အချင်းချင်း လဲထင်ယောင် ထင်မှားတွေဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း တွေပြောသွားတယ်။ သူတို့က steve ကိုထင်နေကြတာတဲ့၊ အဲဒီလိုတွေဖန်တီးတာမကောင်းပါဘူးတဲ့ ဆိုပြီးဆုံးမခံလိုက်ရပါတယ်....အဟဲ ကျမကတော့ တော်တော်ပျော် သွားတယ်မမဝါ၊ steve ဆိုတဲ့ လူ လဲအခုချိန်လောက်ဆို သူ့ gtalk list ရဲ့ မြောက်များလှစွာသော မိန်းခလေး တွေ ထဲက ဘယ်တစ်ယောက်ပါလိမ့်လို့ ဆန်းစစ်နေလောက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့ မမှုပါဘူးကျမ တို့က တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးလေ၊ နာမည်ပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့နော့။
ဒီလူက မမ သိတဲ့အတိုင်း ထောင့်မကျိုးဘူးလေ သူ့ကိုသူ england ကဆိုပြီးမာန်တက်နေတာ၊ စကားကလဲဖောင်းသေးတယ်၊ ဆော်ဖန်ချင်ပြီး ဆော်မရဘူးဖြစ်နေတဲ့လူ၊အထက်စီးကလေဘယ်ရပါ့မလဲ၊ မမသိတယ် မဟုတ်လား၊သက်တန့်ချိုဆို ဆရာဝန်ပဲ ဘယ်မှာ ထောင်လို့လဲ စာအရေးသားကောင်းတယ်၊ သူ့ blog ဝင်ကြည့်လိုက်ရင် ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးတွေ နဲ့စာဖတ်သူတွေကို ကြိုဆိုထားတာ ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်သလဲမဝါရယ်၊ ထူးဆန်းထွေလာ post တွေလဲတင်ထားတာ တော်တော်ဗဟုသုတရတယ်။ ဟင်း ဟင်း....steve ဆိုတဲ့လူကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ gtalk မှာ add ပြီးလာဆဲလို့ရပါတယ်။ မဝါရယ် ဒီလိုရေးလို့ ဒီလိုမေတ္တာ တွေပို့ခံရမယ်ဆိုတာသိတာပေါ့်၊ လူအများချစ်ခင် အောင်ရေးရင်လဲ ရေးလို့ရတာပေါ့နော်၊ ဖိုးစိန် တို့လိုလေ သူ့blog ဖတ်ပြီး သူ့ကိုသနား လဲသနားတယ်၊ လေးလဲလေးစားတယ် သူ့ဘဝရဲ့ အမှန်တွေကို ပြောပြီး ရိုးရိုးသားသားလေးရေးထားတာ။ ဒါပေမဲ့ မဝါရယ် mmblog လောကကြီးဘယ်လောက်ပျင်းဖို့ကောင်းလဲ၊ ကမ္ဘာကျော် media ကြီး တွေတောင် ကမ္ဘာကျော်celebrities တွေ မကောင်းကြောင်းရေး ကြသေးတာပဲ၊ ကျမလဲ လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့celebrity mm bloggers တွေရဲ့ အတင်းတွေရေးခွင့်ရှိတာပေါ့ နော်။,ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဝါ။
မခင်ဦးမေအကြောင်း တော့ ပြီးသွားပြီလေ၊ သူ့စီဘောက်မှာလဲ အတုနာမည် တွေအများ ကြီးနဲ့ သူ့ကိုယ်မယုံ ကိုယ့် သူ့မယုံနဲ့ စွတ်စွဲနေကြတာ ကျမကတော့ ပွဲကြည့်ပိရိတ်သတ်အနေနဲ့ ရယ်နေမိတယ်။ သူကနပ်တယ်လေ လူတွေ အမြင်မှာ သဘောထားကြီးသူလိုလို၊ မဝါရေးသလို လိမ္မာသော အဝေဖန်ခံနိုင် သူလိုလိုနဲ့ ၊စီဗုံး ကို တစ်ခါမှ မလာသလိုလိုနဲ့ သူလုပ်တာ တွေသူအသိဆုံး ဖြစ်မှာပဲ။ စီဘောက် မှာ အမြဲစောင့်ကြည့်တတ်တဲ့ ကျမတို့ ကတော့ ဘယ်သူက ဘယ်လေသံ ဆိုတာ ဖမ်းတတ်နေပါပြီ။ တစ်ချို့တွေကရိုးတယ်လို့ထင်ရလောင် အောင်ကိုလည်တယ် ဆိုတဲ့ စာဆိုလဲရှိတယ်မဟုတ်လား၊ မရီတာ ပြောသလို သူလဲ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့်၊ ghost ပြော သလို အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် ကျမတို့နဲ့ မတွေ့ နိင်တာဖြစ်မှာပါ၊ ဒါနဲ့....စကားမစပ် ဝေဖန်ရေး blog အသစ် တစ်ခုပေါ်နေတယ်လေ မဝါလဲသိပြီးရောပေါ့၊ အ ဟင်း.... လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကတော့ကျမအတိုင်းပဲ ၊ အဲဒီ blog link လေး ကို မနိုင်းနိုင်း နဲ့ မkom စီ ဘောက်မှာ အချင်းချင်း အတင်းပြောသလိုနဲ့လာချသွားတာ၊ စီဘောက်တစ်ကာလည်နေတဲ့ကျမက သိတာပေါ့မဝါရယ်။ အဲဒီတော့လဲ welcome ပေါ့၊ ဟီးဟီး အပျင်းပြေတာပေါ့။ အလကားရတဲ့ web page ကြီးမှာ လွတ်လပ်စွာ ကြိုက်တာတွေ တွေး....ရေးပြီး၊ ဒီမိုကရေစီကျစွာ သဘောကွဲလွဲခွင့် ရှိကြ တဲ့ခေတ်ကြီးပါရှင်။ မရီတာကပြောသွားသေးတယ်၊ JD က စိတ်ထားကောင်း ပါတယ်တဲ့......အင်း ဟုတ်မှာပါ၊ ယောက်က်ျားသားပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ အသုံးချခံ နယ်ရုပ်ခလေး တွေဖြစ်သွားတတ်တာ ဓမ္မတာပါပဲ။ နောက်ထပ် နယ်ရုပ်ခလေး Boyz ကိုလဲ gtalk မှာ add ထားပေမဲ့ စကားမပြောဖြစ်သေး ဘူး၊ မဝါ ရေ နောက်နေ့ ဆက်ပြောမယ်နော် တစ်ခြား တစ်ခြားသော celebrity bloggers တွေအကြောင်း။ မမတို့မိသားစု ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Posted by Myat Noe Khin at 03:11
ရွာသားလေး(YTU) သို့ပေးစာ (အပိုင်း ၄)
သူငယ်ချင်းရေ ဒီနေ့ တော့ မဝါဆီ က mail ရလာတယ်၊ မဝါက ဓတ်ပုံ ဖြုတ်ပေးဖို့ တို့ကို request လုပ်လာတာပါ၊ ရုပ်ကလေးချောသလိုသဘောထားလဲပြည့်ဝတဲ့ မဝါကို တို့ကအမြဲ respect ရှိပြီးသား၊ တို့ကိုမပူလောင်ဖို့ လဲ ဆုံးမစကားတွေပြောသွားသေး၊ တစ်ခြားလူဆိုရင်တော့ ပြန်ကောလိုက်မိမယ်၊ မဝါ တို့လင်းလက် တို့လို အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းလေးတွေနဲ့ တော့တို့က အမြဲ တမ်းမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ မဝါရေ အခုဖြုတ်လိုက်ပြီနော်၊ မဝါ ဆု တောင်းပေးသလို ကျမအေးချမ်းပါတယ်၊ ဒေါသတွေလဲမပွါး ပါဘူးလေ၊ လျှို့ဝှက်ချင် သူတွေကိုစပ်စု တတ်တဲ့ ဝါသနာပဲရှိတာပါ မဝါ ရယ်၊ အဟဲ ခုတော့စာနဲနဲ ဆက်ရေးလိုက်ဦး မယ်နော်...ကျမဒီလို တွေရေးတဲ့အတွက်လူ မုန်းများမယ်ဆိုတာ သိတယ်လေ၊ ကို့ကိုဝိုင်းဆဲဖို့စောင့်နေကြတာမဟုတ်လား၊ ဒါကြောင့်ဘယ်စီဘောက်မှမသွားပဲ ကိုယ့် blog မှာပဲ ကိုယ်ရေးတာ၊ ကျမကို အောက်တန်းကျတဲ့ မိန်းမလိုလိုယောက်ကျားလိုလိုဆိုပြီး တင်စားတဲ့သူကတင်စားနဲ့၊ ဆိတ်...ဟိုဟာဆိုပြီးရေးချင်တဲ့သူကရေးနဲ့၊ စိတ်မနှံ့သူလို့ဝေဖန်သူ နဲ့၊ ဒီလို ဆိုးရွားနိမ့်ကျလှစွာ သောဂုံဏ်ပုတ်တွေနဲ့ ကျမလို လူမျိုး ရဲ့ နာမည်ကိုမှ အတုလုတ်ပြီး မkom စီဘောက်မှာသွားပြောတဲ့သူကရှိသေးတယ်။ မဝါကို တိုင်တည်ပြီး ပြောတယ်နော် ကျမဘယ်စီဘောက်မှာမှ မလည်တော့ပါဘူး။
Boyz ကလဲကျမကိုဆဲထား သေးတယ်နော် Boyz သူငယ်ချင်းမ မဲလေး စီဘောက်မလာ တာကျမကြောင့်တဲ့၊ Boyz ရယ် သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်သူရှိလို့လေ မအားတာလဲနေမှာပေါ့၊ကျမကြောင့်ချည်းပဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူးလေ၊ Boyz လို ယောက်က်ျားပီပီသသ ပုံနဲ့ဆို Boyz လိုချင်တဲ့ ကိုရီးယားမလေးတွေ အများကြီးရနိင်ပါတယ်၊ Boyz ရဲ့ ဓါတ်ပုံထဲက ချစ်စရာ vietnamese မလေးတွေလဲ ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးတွေနဲ့တူပါတယ်။ Boyz ကတို့ကို အခြောက်လိုလို ကောင်တဲ့ တို့ကစိတ်မဆိုးပါဘူး၊ Boyz အသံထွက်ပြီးအားရပါးရ ဆဲလို့ရအောင် g talk မှာ add ထားတယ်၊ Mr.Boyz@gmail.com မဟုတ်လား၊ စီဘောက်ထဲမှာ မရီတာကိုလား vista ကိုလားပေးသွားတာ၊ Boyz ရဲ့အသံ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေကို စောင့်နေပါ့မယ်၊ အင်း.....Boyz ရေ စီဘောက်ထဲမှာ ghost ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ပြော သွားလို့ မkom အကြောင်းလဲ တော်တော်စုံ သွားတယ်၊ ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိပါဘူး၊ သူ့စွတ်စွဲချက်တွေကကိုယ့်ထက်ပိုပြင်းထန်သေးတယ်၊အကုန်တော့ယုံလို့မရဘူး၊ မဝါစကားနားထောင်တာပဲ ကောင်းတယ်၊ နောက်ဆက်မစုံစမ်းတော့ဘူး။
အဲ သူငယ်ချင်းရေ မရီတာကလဲ တို့ ကို ကျားလားမလားဆိုတာ သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေတယ်၊ Mr DBA ကို အတင်းလိုက်ပြီး interview နေလေရဲ့၊ မရီတာ ရေ ရှင်က တော့ကျမကို ဆဲမဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ်၊ JD ရဲ့comment ထဲမှာလဲ ကျမကို မျှမျှတတ ဝေဖန်ထား တာဆိုတော့၊ ကိုယ့်ကိုဆဲမဲ့သူတွေနဲ့တောင်ပြော ချင်သေးတာ ရှင်နဲ့ဆိုပိုပြောချင်တာပေါ့နော်၊ ရှင့်ရဲ့ email ပေးလေ ဒါမှမဟုတ်ကျမကို add လို့ရပါတယ်၊ Mr DBA က ရယ်ရတယ်ခလေး တစ်ယောက်အဖေ ဖြစ်ကြောင်း စီဘောက်ထဲ ဝင်လာထဲက ကြော်ငြာနေတယ်၊ ကျမ သိပါတယ် ကိုဒီဘီ nice ဖြစ်တာကို၊ ကျမ ဗညား ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကိုဒီဘီကိုစကားပြောဘူးတယ်လေ၊ မှတ်မိမှာပါ။ ကိုဒီဘီကတစ်ခါတစ်လေ sdl ကို ညီမလေး ညီမလေး ဆိုပြီးပြောင်လေ့ရှိတယ်။ sdl နဲ့ ကိုဒီဘီတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ခင်စရာကောင်းတယ် ရွာသားရေ့ ၊ နောက်နေ့ဆက်မယ်သူငယ်ချင်း ။အဲ မဝါရေ အမပြောလို့ ဒီနေ့ နဲနဲ လိမ္မာတယ်နော်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တွေ ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးနော်၊ ဓက်ပုံတွေလဲ ဖြုတ်လိုက်ပြီနော် မဝါ။
မဝါရဲ့ email အောက်မှာဖော်ပြထားတယ်၊ မဝါကိုသူများတွေအထင်မှားမှာစိုးလို့ပါ၊ မkom စီဘောက်ထဲမှာ မြတ်နိုးခင်ဟာ ဝါဝါခိုင်မင်းလားဆိုပြီးမေးထားတာဒီမနက် တွေ့ခဲ့ တယ်၊ မြတ်နိုးခင် ဟာ မြတ်နိုးခင်ပါပဲလို့ ပြောပါရစေရှင်၊
from nan war war mg
to myatnoekhin33@gmail.com (Yes, this is you.) Learn more
date Mon, Oct 12, 2009 at 7:19 AM
ညီမမြတ်နိုးခင်လို့ ရေးရမလား ၊( မောင်) မြတ်နိုးခင်လို့ ရေးရမလား..
ဒါပေမယ့် ခေါ်လက်စအတိုင်း ညီမမြတ်နိုးခင်လို့ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်နော်.
အစ်မတစ်ခုလောက် တောင်းဆိုချင်လို့ပါ ။
ညီမဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတဲ့ အစ်မတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံကိစ္စလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ်မ တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုခွင့်ရှိရင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။
ညီမက အစ်မတို့ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ တကယ်ပါခဲ့တာလား။အဲဒီဓါတ်ပုံထဲမှာ ညီမဆိုလို့ ညီမငယ်ဝေလေးတစ်ယောက်ပဲပါဝင်တာလေ။
ညီမလေးဝေလေးကို စာဖတ်သူတွေ တမျိုးထင်မှာကို အစ်မစိုးရိမ်မိပါတယ် ညီမ။သူဟာ အရမ်းရိုးသားပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့
ညီမငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ။သူ့အပေါ် သူများတွေတမျိုးမထင်စေချင်ပါဘူး ညီမရေ။
ပြီးတော့ အဲဒီဓါတ်ပုံထဲမှာ ရွာသားလေးလည်း မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ မင်း နဲ့ ငါ ပါတယ်လို့ ရေးထားတော့ ဓါတ်ပုံထဲကသူ တစ်ယောက်ယောက်များလားလို့ အစ်မသံသယ၀င်ခဲ့မိပေမယ့် အစ်မတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေ
အားလုံးဟာ ရိုးသားကြပြီး ၊တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ခင်မင်လေးစားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ညီမ ဘယ်သူ့ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလည်းဆိုတာကိုတော့ အစ်မ နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ ဖြစ်ရပါတယ်။
မခင်ဦးမေကို မကျေမနပ်ဖြစ်မိတာ အစ်မနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပေါက်ကွဲမိတယ်ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ရတော့ အစ်မက တရားခံဖြစ်သွားသလိုပါပဲလား။
မခင်ဦးမေကလည်း လူအတွေ့မခံချင်တာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ် ညီမရေ.. အဲဒါကို နားလည်ပေးလိုက်ပါနော်.
ကျေးဇူးပြုပြီး ညီမဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတဲ့ အစ်မတို့ဓါတ်ပုံလေးကို ဖြုတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ညီမ။
ညီမ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းအစ်မ မသိပေမယ့် ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်သူမို့ မိဘတွေနဲ့ဝေးနေရချိန်မှာ ကိုယ့်မြန်မာမိန်းကလေး ညီမလေးတစ်ယောက်ကို
အစ်မပြောသင့်တယ် ထင်တာလေးတွေပြောပြခဲ့မိတာပါ ညီမ။
ဒေါသတွေ ၊ခံစားနေရတာတွေကို လျှော့လိုက်ပါညီမရယ်။
ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေရဲ့ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုက ညီမအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
ညီမ ဒီစာဖတ်ရရင် စာပြန်ပေးလာပါဦး။
Posted by Myat Noe Khin at 07:42
ရွာသားလေး(YTU) သို့ပေးစာ (အပိုင်း၃)
အင်း ရွာသားရေ ရှင်ကစိတ်မဆိုးပေ မဲ့ JD ကအကြီးအကျယ်စိတ် ဆိုးနေပါရောလား။ မဝါပြောသလို အဝေဖန်ခံနိင်သောသူလိမ္မာ၏ဆိုတာကို နှလုံးမသွင်းနိုင်ကြသေးဘူးကိုး၊ မကောင်းပြောခံရသူတွေစိတ် ဆိုးနေကြတယ် တစ်ချိန်ထဲမှာ အကောင်းပြောခံရတဲ့ သူတွေကျေနပ်နေကြတယ်။ ဪ တယ်လဲတစ်ရားကျစရာကောင်းပါလားနော်၊ မ kom က တော့ well-trained ထင်တယ်၊ စိတ်တိုတာကိုမပြပဲ ပညာသားပါပါပဲ JD ဆီမှာရေးသွားတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အ ကြောင်း သိချင်စိတ်တွေ များနေတာလား မသိ၊ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် ကြီးစိတ်တိုတာချက်ခြင်းလာ ပြောတယ် ဒါကောင်းတယ် သူ့ရဲ့ပွင့်လင်းတာကိုပြတာပဲ၊ သူဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်လိုပုံစံလဲ အကုန်သိရတယ်၊ JD နဲ့ ရှင် blog မှာဓတ်ပုံ မတင်ပေမဲ့ ရှင်တို့ ရဲ့ post တွေမှာ ဖတ်လိုက်ရင်ရှင်တို့ဘယ်က၊ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သိရ တာပဲ၊ မkom ဘာလို့ အဲလောက်ကွယ်ဝှက် တာလဲ ဆိုတာ ၊သူ့ ပုံမမြင်ရတောင် သူဘာလုပ်လဲ တို့ တွေသိသင့်တယ်မဟုတ်လား၊ တော်ကြာနေဘုန်းလတ်ထောင်ထဲရောက်ပြီးမှ သူ့သူငယ်ချင်း blogger တွေပျောတ်ကုန် တာမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်သလား။
JD ကိုတို့ကစိတ်မဆိုးပါဘူး၊ သူ့ post ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ မျက်ရည်တောင်ထွက်တယ်၊ JD ရေ ရှင်က ကျမကိုကျား လား မလားသိချင်လျင် g talk ကိုလာခဲ့လေ၊ အဆဲပုတ်တဲ့ရှင့်ဆဲသံတွေကြားချင်ပါ သေးတယ်၊ kkmg က မနေ့ကစီဘောက်မှာလာ အော်နေတယ် ကျမက သူ့အ ကြောင်း မရေးလို့တဲ့၊ kkmg ရယ် ရှင်က ကျမကို ယောက်က်ျား လေး အသစ် ရှင့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးလား ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသမီးရေး စိတ်ဓတ်ပဲပြင်းထန် တာလား၊ စီဘောက် မှာကျမ စကားလိုက်ပြောတော့ ရှင် ပြန်မပြောဘူးလေ၊ ရှင့်မှာ blog လဲမရှိ ဆိုတော့ ဘယ်လို ဝေဖန်ရမလဲ၊ သတိထားမိတာကတော့ ရှင်က Boyz နဲ့ kom စီ ဘောက်မှာပဲနေတယ်၊ Boyz နဲ့ steve ကိုနှိပ်ကွပ် ဆဲလေ့ရှိပြီး ကောင်မလေးတွေကိုလုံးတယ်၊ တစ်ခြား ယောက်က်ျား လေးတွေလာရင်တော့ ရှင် ပျောက်သွားရောပဲ၊ ရှင်လဲ kom ကိုလာ ထောက်လှမ်း တာမဟုတ်လား၊ အကြံတူဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်လိုက်နော့၊ ရှင်က email လဲမရှိနဲ့ ရှင်ကမှ တစ်ကယ် သူလျှိုဖြစ်ရမယ်။
နန်းညီလေးကတော့ သနားစရာ ချစ်စရာ ရုပ်ကလေးနဲ့ ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေး သူ့ပုံ လေးတွေ FB မှာမြင်ဘူး နေတာ၊ ယောက်ကျရှာလေးလို အမြဲဝတ် လေ့ရှိတယ်၊kom ဆီမှာတစ်ချိန်လုံးလာပြီး nn နဲ့ ပြောတာ၊ တို့သွားစကားပြောတော့ သူ့ blog link လေးပေးလိုက်သေးတယ်၊ သူ့ကို တော့ kom စီဘောက်က ကောင်လေးတွေ ကစိတ်ဝင်စားပုံမရဘူး၊ သူကရိုး တာကိုး၊ ပဲတွေမှလူစိတ်ဝင်စားခံရတာမဟုတ်လား၊ မျိုး ကျတော့ kkmg, Boyz,steve တို့က မျိုးလေး မျိုးလေးနဲ့ အင်း ဒါလဲသဘာဝကျပါတယ်၊ မျိုးကပိုချောတာကိုး ၊ ကောင်မလေးတွေပုံ တော့ ဒီမှာမတင်တော့ဘူး FB မှာကြည့်လို့ရတယ်၊ လျှိုတဲ့လူတွေ ပုံပဲ တင်မယ် ရွာသားရေ့။ vista က ဒီနှစ်ထဲမှ blog စရေး တာ၊သူလဲ လျှို့ဝှက် သူပဲ၊ ဓတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာ တော့တော်တော်လှတယ်၊ စာရေးတာကြည့်လိုက် တော့မှမိန်းခလေးလို့ခန့်မှန်းမိတာ၊ သူလဲအေးဆေးပါ၊ ငါ့ရံ့ .... မဟုတ်ဘူး။ kom က သူ့ကိုအချစ်တဲ့၊ တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ kom ကမှ မရိုးတာ ပေါက်နဲ့ မဲလေးကိုလဲ အချစ်တဲ့၊ တစ်ကယ်ခင်တာလား blogger တွေကို ပဲခင်သလိုလို နဲ့အယောင်ဆောင်လုံး တာလားလို့ တွေးနေမိတယ်၊နောက်နေ့ဆက်မယ်သူငယ်ချင်းရေ့၊ ဗိုက်ဆာပြီး တာ့ တာ့
Posted by Myat Noe Khin at 19:15
ရွာသားလေး(YTU) သို့ပေးစာ ( အပိုင်း နှစ်)
ရွာသားရေ ဒီနေ့ဆက်ပြောမယ်နော်၊ တစ်ရက် စီဘောက်မှာအဲ ဒီလိုနဲ့ ဝင်ပြော တော့ သစ်သစ်က တို့ကိုယောက်က်ျားလေး အသစ်ဆိုပြီး အတင်းလိုက်စကားပြောတယ်၊ တို့က အဓိ ကkom နဲ့ပြောချင်တာ၊ သူလေးကိုလဲ တွေ့ဘူးနေကြလေ မျက်နှာလေး ကတော်တော် လှ ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲနဲ ဝ တယ်လေ၊ နောက်နေ့ သွားလဲ သူကပဲ အတင်းလိုက် ပြီး ဘယ်ကလဲ ဘာညာ မေးနေ တာ၊ တို့က ပေါက် နဲ့ မေ ကို ပြောနေတဲ့ အ ချိန်မှာပေါ့။ တို့လဲဒီ ကောင်မလေး တော့ နဲနဲ လေး နှိပ်မှဖြစ်မယ် ဆိုပြီး သူ့ကို ဘဲ အရမ်းလို ချင်နေတဲ့ ကောင်မလေး ဆို ပြီး စီ ဘောက်မှာ အော်လိုက်တာ ပဲ၊ တစ်ကယ် က သူ့ ကိုမမုန်း ပါဘူး၊ သူလဲ လွတ်လပ် သူပဲ ကြောင်ခွင့် အပြည့် ဝရှိ ပါတယ်။ တို့မနေ့ကပြောခဲ့ သလို ပဲ ပိုင်ရှင်ရှိရဲ့ နဲ့ ဖွန် ချင် နေတဲ့ လူတွေကိုပဲကြည့်မရတာ။ sdl က တော့ လူကြီး ဆန်ပြီး တော်တော်ချစ်ဖို့ ကောင်း တယ်၊တို့ကို လူ သစ် လေးဆိုပြီး ကောင်း ကောင်း ဧည့်ခံ ပြီး စီဘောက်ထဲက လူတွေအကုန် ရဲ့အကြောင်း ပြောပြ ပြီး မိတ်ဆတ်ပေးနေလေရဲ့။ သူက married ဖြစ်တဲ့ အ ကြောင်းလဲပြော သေး တယ်၊ ပျော် ပျော် နေတတ်တဲ့သူ့ကိုတော့ တို့က အ ကောင်း တွေကြီး ပြောခဲ့ တာ ရှင်သိပါတယ်။
ဟိုနေ့က မရီတာက ကျမကို July Dream blog မှာ လိုက်လာပြီး မေး သေးတယ် နော်၊ မရီတာ ရေ အ ထက်ကပြော ခဲ့ တဲ့ အ တိုင်းပါပဲ၊ မရီတာက တော့ ဖွန်မဟုတ်ဘူး စာကြီးပေကြီး တွေဖတ်ပြီး တည်တည်ကြည်ကြည် နဲ့ လူကြီး ဆန်တယ်ဆိုတာ သိရတယ်၊ ဗလွတ် ရှတွတ်တွေလဲမပြော တတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ သူများကစ နေတာကို သဘောမပေါက်ပဲ စိတ်ဆိုးပြီး အတင်းလိုက်ငြင်းတတ်တာလေး က တော့ ကြောင်စီစီ နိုင်သလားလို့ပါ။ အင်း....မရီတာကိုလဲ Boyz ကသမာဓိပိုးပိုး တာပဲ စသလိုလို ပြောင်သ လိုလိုနဲ့ လေ၊ သူက nn နဲ့ နီညမ်း လဲမချန်ဘူး ဪ မျိုးလဲကျန် သေး တယ်၊ တစ်ကယ်တော့ သူက ကိုးရီးယား မင်းသမီးရူး ရူးလေ၊ အဲလို မင်းသမီး ရုပ်လေး များရမလားလို့ စီဘောက်တွေထဲအချိန်ဖြုန်းနေတာ၊ သူ့ကိုတော့ မစဉ်းစားနဲ့ မရီတာ ရေ့ ၊ ရွာသား ကမှ မရီတာနဲ့လိုက်တာ၊ စာရေး ကောင်းတာလဲမရီတာလိုပဲ၊ ပေါတောတောလဲမနိုင် စကားပြောလဲ ယဉ် ကျေးနဲ့ July Dream နဲ့များ ဆီ နဲ့ရေ၊ မိုးနဲ့မြေ လောက်ကွာ တယ်။ JD ဆိုတဲ့ ဘဝင်လေ ဟပ် က လူတစ်ကာလိုက် ဟောက် ပြီး တစ်ခါ မှ စကားကောင်းကောင်း မပြောဘူး၊ မအပ် မတန် နုနုရွရွ လေး တွေ၊ ချစ်သူလေးကိုပန်းလေးတွေနဲ့တင်စားရေး နဲ့ သူ့ရဲ့ အဆဲပုတ်တဲ့ပါးစပ် နဲ့ လားလားမှမအပ်စပ်တာတွေ၊ ခုလဲ kom ကသူ့စီဘောက်ကို control လုပ်ခွင့်ပေးထား တော့ ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာမော်ကြွားနေပုံရတယ်။
အဲဒီလိုဆောင့်ကြွားကြွားတွေ ထဲ mark နဲ့ ခပ်မြင့်မြင့်လဲပါတယ်၊ mark ကိုတော့ ကျမက အပြစ်မမြင်ဘူးမရီတာ၊ သူက ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ လိုက်မတိုက်ခိုက်ဘူး၊ blog တွေထဲလည်ပြီး ဇတ်လမ်းလဲရှုပ်မနေဘူး သူ့ blog မှာသူနေပြီး သူသိသမျှ IT ပညာလေးတွေ ဝေမျှနေတာ၊ ခပ်မြင့်မြင့် သူကဖြင့်ဘာမှ မရေးတတ်ပဲ နဲ့ နာမည်ကကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်၊ kom ဆီ comment လာပေးတဲ့သူ တွေကို သူကဝေဖန်ရတာနဲ့ဘာနဲ့ ကျမ သားအရွယ်လောက်မို့လို့ တစ်ကြောင်းထဲ ဝေဖန်ခဲ့တာ yangon အကြောင်းထပ်တစ်ရာ ရိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးလို့။ သူ့လိုငယ်ပေမဲ့ လင်းလက်ကြယ်စင် တို့များ တော်လိုက်တာ၊ ဒီကောင်မလေး ရေးတာတွေ က mature ဖြစ်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ထဲ ကဖတ်ဖူးနေတာ၊ အခုမဖတ်ဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့။ မရီတာရေ အပြင်သွားစရာရှိသေးလို့နောက်နေ့မှ ဆက်မယ်နော်။ မရီတာကလျှို့ဝှက်သူမဟုတ်တော့ မရီတာ ဓတ်ပုံတွေတော့ ကျမ ကူးမထားဘူးနော်၊လူတိုင်း မရီတာ blog မှာကြည့်လို့ရတာနေတာ၊သွားပြီ မောင်ကိုကိုနဲ့မရီတာရေ့။
Posted by Myat Noe Khin at 02:50
ရွာသား ရေ မင်းက မေး လို့ တို့ရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲဆိုတာပြောပြမယ်။ ဘာမှတော့ ထူးထူး ထွေထွေမရှိပါဘူးပျော်လို့လုပ်နေတာလဲမဟုတ်ဘူး၊ မြတ်နိုးခင်ဆိုတာ မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းထဲကတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်း တွေ အားလုံးကိုကိုယ်စားပြု ထားတဲ့နံမည်ဆို ရင်လဲမမှားဘူးပေါ့ကွာ။ မဝါလာတုန်းကတောင် တို့တွေ အတူသွားတွေ့ ကြသေးတယ်လေ၊ မဝါ နဲ့ယှဉ်ကြည့် တော့ မှ မခင်ဦးမေ တို့ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်သေးဘူးလို့ ခံစားရပြီး တော့ ငါစသောင်းကျန်း ဖြစ်တာပဲ၊ မင်း သူ့ကိုအပြင်မှာ ဘယ်နှစ်ခါမြင်ဘူးလဲ တို့တွေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး
အင်း မင်းမြင်ဘူးရင် လဲမြင်ဘူးမှာပေါ့ မင်းက.... ဆိုတော့၊ သူကတို့တွေကို မတူတန်သလိုဆက်ဆံတာလေ၊ blogger တွေဆုံဖို့ ဖိတ်ဖူးတာ အခါခါ လေ ဘယ်နှစ်ခါလာဘူးလဲ?
ငါတို့ကတော့သူ့ကို ခင်လို့ သူ post အသစ်တင်တိုင်း သွားသွားဖတ်ပြီး comment တွေပေးရတာအမော၊ ထားပါတော့ တစ်ချို့က လူ တွေနဲ့ တွေ့ ဆုံ ဆက်ဆံဖို့ဝန်လေးတတ်ကြတယ် ဆိုပြီးမေ့ထားလိုက်တယ်၊ အဲ ဒါပေမဲ့ သူက ရန်ကုန်ပြန်တော့ ကိုနဗန နဲ့ တစ်ချို့တွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့တယ်။ ဒါ နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူနဲ့မကြာခဏ စီဘောက်ပြော ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီမှာ သူ အများဆုံး မျက်နှာသာပေးတာ ကTZA နဲ့ July Dream ၊ သူကအမျိုးသားရေးစိတ်ဓတ် ပြင်းထန်ပုံရတယ်၊ မောင်လေးတွေဆိုဘာပြောပြောစိတ်ဆိုးပုံမရဘူး၊ ဟိုကောင် steve ဆိုတဲ့ ကောင်ထောင့်မကျိုး ပြောနေတာလဲ ကြည် နူးနေပုံရတယ်၊ TZA၊ JD နဲ့ Boyz တို့ဆီမှာ အမြဲတမ်းပဲ၊ ခုလဲကြည့်လေ သူ့ စီဘောက် ကို JD က ကိုင်ထားတယ်၊ ဒါဘယ်လောက်ရင်းနှီးတယ် ဆိုတာပြနေတာပဲ။ မင်းသတိမထားမိလို့ ပါ ငါတို့တွေက သူ့ စီဘောက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာ တော် တော်ကြာပြီး၊ ညသန်း ခေါင်ကျော်မှ စီဘောက်လာ တတ်တာတွေ မနက်လင်း အားကြီးမှ post တင် တတ် တာ တွေ ဘာတွေ လျှိုဝှက် တာလဲ၊ ဒါမှ မဟုတ် ထွင်တာလားပေါ့၊ တစ်မျိုးလဲသံသယဝင် မိတယ်၊ သူ့မှာ ယောက်က်ျား ရှိတာ မဖြစ်လောက်ဘူးလို့၊ တို့တွေ သူ့ကိုသနားမလားလို့ ယောက်က်ျား ကဂရုမစိုက် တဲ့ အကြောင်း ထည့်ရေးတာဖြစ်မှာပဲလို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်။ တစ်ခါ ပြန်စဉ်းစားမိတော့လဲ ဪ သူ့ယောက်က်ျား အိပ်နေတဲ့ အချိန်ခိုးပြောတာထင်တယ်လို့ တွေးမိပြန် ရော၊ တို့က အဲ့လို မိန်းမ တွေကို အထင်သေးတယ်၊
မဝါ တို့ မမိုးချို တို့ ဆိုရှင်းတယ် ဘာမှကွယ်ဝှက်တာမရှိဘူး၊ မဝါဆိုတို့ နဲ့ ခင်သာခင်တာ တစ်ခါမှ အချိန်မတော် မပြော ဖူးဘူး၊ kom နဲ့ စရိုက်တူ တဲ့ သူ တွေကိုလဲ သူ့ စီ ဘောက်ထဲမှာ တွေ့ရတယ်၊ ငါက အပျို လူပျို အီ တာ သဘာဝဆိုတာ ကိုလက်ခံထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သစ်စ္စာမဲ့သူတွေ ကိုကြည့်မရဘူး၊ သူ့အုတ်စုထဲမှာ သစ်သစ် နဲ့ မျိုးကနေ့ခင်းဆိုလာတတ်တယ်၊ နန်းညီ နဲ့ nn လဲပုံမှန်လာသူတွေပေါ့၊ sdl ကတော့ အချိန်တော်တော်များများရှိတတ်တယ်၊ ပေါက် နဲ့ mae (မဲ လေးလို့ Boyz ကချစ်စနိုး ခေါ်သော) ကတော့ ညမိုးချုတ် တွေမှလာတတ်တယ်၊ အဓိက ကတော့ကွာ kom အကြောင်းသိချင်လို့ ငါ blog stalker လုပ်တယ်ဆို ပါစို့။
ဒါနဲ့ FB မှာ သူတို့တွေ ကိုရှာမိ တယ်၊ လျှို့ဝှက်ခြင်သူတွေကို ဖော်ထုတ်ချင်လေ့ရှိတဲ့ငါ့ဝါသနာလေ..ဟဲ.. ဟဲ kom အရမ်းနပ် တယ်နော ဓတ်ပုံ တို့ info တို့ ဘာမှမသိရဘူး။ တစ်ချို့ဆို ဓတ်ပုံမပါပေမဲ့ info တော့ ပါတတ်တယ်လေ၊ အဲဒီမှာမမျှော်လင့်ပဲ mae ကိုတွေ့တာပဲ၊ သူ့နာမည်ရင်းလဲမသိတော့ မဖိတ်မိပါဘူး ဒါမဲ့ group တွေဝင် တာ တူသွားတယ်ထင်တယ်၊ mae ကဓတ်ပုံရိုက်ကောင်းတယ်လို့ kom ဆီမှာနာမည်ကြီးတော့ သူ့blog စဆုံး ဖတ်ဘူးတယ် သူparis သွားတုံးကတင်ထားတဲ့ပုံ တွေတွေ့ ဖူးတော့မှတ်မိနေတာ ဟား ဟား သူက engaged တဲ့ သူ profile မှာ၊ ထူးဆန်းတာသူ့ husband to be ရဲ့ပုံတော့ တင်မထားဘူးဗျာ၊ တို့လဲ သိချင်ဇောကြီးသူလေ ဘာလို့ c box မှာအဲဒီလောက် အချိန် ဖြုံး နိုင်ပါလိမ့် ပေါ့ fiance` ရှိသားနဲ့ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ engaged to ကြီးကို click နှိပ်ဖိတ်လိုက်တာပေါ့ဟာ၊ ဟိုနွားလေးက ယောင်လည်လည်နဲ့ accept လုပ်လာတယ် လေ၊ ဓတ်ပုံတွေလဲတင် ထားလိုက်တာ သူ့ခမြာ ကြွားချင် လွန်းလို့ ထင်ပ ချစ်သူလေးနဲ့ တွဲထားတဲ့ပုံ ခလေးပုံ လေးတွေတင်ထားတာ၊ ငါကအကုန် save လုပ်ပြီး fliker နဲ့ picasa မှာတင်ထားလိုက်တယ်လေ။ သစ္စာ မရှိ လျှပ်ပေါ် လော်လီ တဲ့ လူ တွေကိုမုန်း တတ်တဲ့ ငါ့ ဝသီအတိုင်း သူတို့တွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့။
မင်းပျင်းပြီလား နဲနဲဆက်ပြောဦးမယ်ကွာ၊ တိုတိုပြော ရင် စီဘောက်မှာစောင့်ကြည့်တယ် တစ်ခါတစ်လေနာမည်သစ် တွေနဲ့ဝင်ရောတယ်။ ပေါက် နဲ့ အဲဒီမဲလေးက ရင်းနှီးကြတယ်၊ ပေါက်က ထိုင်ဝမ်က သူ့ သမီးလေးအကြောင်း တစ်ခါတစ်လေပြောတယ်၊ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး Boyz နဲ့ steve ကို တော်တော်လုံးတယ်၊ mae ကတော့ Boyz ကို တော်တော်သဘောကျပုံရတယ် မပီကလာပီကလာတွေ နဲ့ဟိုအရင်က မယ်လိုဒီမောင်ပြောသလိုမျိုး တွေပြောပြီး ကျူနေတာ။ ငါကလဲအဲလိုပတ်ချွဲနပ်ချွဲ ကောင်မတွေဆို နောက်ကနေ ဖင်ကိုဆောင့် ကန်ခြင်တာအထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူမဟုတ်ပဲ ပလီနေတာတွေလေ။ steve ဆိုတဲ့ လူကိုလဲ ငါကနှိပ်ချင်တာ ထောင့်မကျိုး ဘူး၊ မိန်းခလေးမှန်သမျှ ပေါ်တင် ရောတာ ပြီးတော့ သူကအထက်စီးက၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာစီဘောက်လဲမရှိ comment box ကလဲ ဆင်ဆာ ဆိုတော့ တို့အခွင့် မသာဘူးဖြစ်နေတယ် သူငယ်ချင်းရေ့။
ဒေါ်ခင်မင်းဇော်က တော့ငါ့ သူငယ်ချင်းဗမာပြည်ကလူ တွေ ကို မြန်မာ blogger society ထဲမှာသွားဆော် ထား တာ၊ သူတို့တွေက တော်တော်တင်းနေကြ တာ ပြန်ပြောပြန်ရင်လဲလူကြီး ကိုယ့်ပဲရိုင်း တယ်ပြောခံရမှာ၊ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုယ်စား ငါ တုတ်ပေးလိုက်တာ။ နင်သိပါတယ် ငါလူတိုင်းကိုမကောင်း မပြောဘူးဆိုတာ၊ နိုင်းနိုင်းစနေ သူ့ဘာသာ အေးအေး နဲ့ရိုးရိုးသားသားလေး တောင်ပေါ်မှာနေပြီး စာလေးတွေ ဘာသာပြန်ရေးနေတာ၊ ငါက ကဗျာ တွေ ပုံပြင်တွေ သိတ်မကြိုက်တတ်ပေမဲ့ သူ့ရိုးသားမှုကို လေးစားတယ်၊ ခင်ဦးမေ လို သူ့ blog မှာcomment များ များရအောင် ဆိုပြီး သူများ blog တစ်ကာလည်comment တွေ ကဗျာကရာ ပေး၊ သူများကလဲသူ့ကို ပြန်လာလည်ပေးနဲ့ ဆတ္တာသည် လင်ပျောက်လို blog တွေကြားမှာပြာယာခပ်နေတာ၊ နိုင်းနိုင်းစနေ မှာ အဲလို ပြိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ စိတ်မျိုးလဲရှိပုံမပေါ်ဘူး။ သူတို့အုတ်စုကြည့် ရတာ အတော်အေးချမ်းတယ်။ အဲ မောပြီ ရွာသားရေ နောက်နေ့ဆက်မယ်နော် FB မှာဓတ်ပုံတင်ထားတဲ့ သူတွေလဲ သွားမပြောနဲ့ဦးနော် လန့်ပြီးဖျက်ကုန်ဦးမယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းရေ ငါကFB account တွေအများကြီးနဲ့ friends တွေထောင်ကျော်နေသူဆိုတော့လဲကိစ္စမရှိပါဘူးကွာ။
Posted by Myat Noe Khin at 15:10